Xildhibaanada labada Aqal ee beesha Mudulood oo xalay kulan la yeeshay madaxweyne Farmaajo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xildhibaanada labada Aqal ee beesha Mudulood oo xalay kulan la yeeshay madaxweyne Farmaajo
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa habeenkii xalay kulan gaar ah la yeeshay xildhibaanada labada Aqal ee kasoo jeeda beesha Mudulood, kadib markii ay Hoteelka ugu tageen salaan iyo inay u hambalyeeyaan doorashadii uu dhawaaan ku guuleystay.
Kulankaasi oo ahaa mid albaabada u xiran ayaa sida la sheegay ku saabsanaa codsi iyo talo soo jeedin wada socda oo ay xildhibaanada labada Aqal ee beesha Mudulood hordhigeen madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo.
Codsigaasi ayaa la sheegayaa inuu ahaa in xilka ra’iisul wasaaraha uu usoo magacaabo shaqsi kasoo jeeda beesha Mudulood, maadaama horey beeshaasi ay uga tanaasushay xilal badan, markii ay haayeen xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa uga mahadceliyay xildhibaanada labada Aqal ee beesha Mudulood kulanka ay ugu yimaadeen, wuxuuna u sheegay inuu tixgelin siin doono codsigooda, islamarkaana kulamo kale ay yeelan doonaan marka uu xilka la wareego.
Dhinaca kale, beesha H/gidir ayaa hore dalab midkaan la mid ah u gudbisay madaxweyne Farmaajo, waxayna dalabkooda ku sheegeen in xilligaan ay iyagu xaq u leeyihiin xilka ra’iisul wasaraaha Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa haatan u muuqda mid culeysyo kala duwan kala kulmaya beelaha Hawiye, maadaama beel walba oo ku abtirsata beeshaasi ay doonayso xilka ra’iisul wasaaraha, waxaana madaxweyne Farmaajo looga fadhiyaa sidii uu kusoo xulan lahaa qofkii qaban lahaa xilkaas.